आँधीखोला खवर | ब्रेकअपपछि युवतीहरुले गर्छन् यस्ता विचित्र हर्कतहरु - आँधीखोला खवर ब्रेकअपपछि युवतीहरुले गर्छन् यस्ता विचित्र हर्कतहरु - आँधीखोला खवर
ब्रेकअप भएपछि दुवैजनाले पीडाको महसुस गर्छन् । कतिले व्यक्त गर्न रुचाउँछन् कति लुकाएर राख्छन् । धेरै टेन्सनमा पर्नेहरु विभिन्न हर्कत समेत गर्छन् । ब्रेकअप भएपछि प्रायः केटीहरुको हाउभाउमा धेरै नै परिवर्तन आउने गर्छ । ब्रेकअप पछि धेरै जोडीहरु आफूलाई पुर्ण रुपमा टुटेको महसुस समेत गर्छन् । केही केटीहरु भने ब्रेकअप पछि आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्तित हुने गर्छन् । आउनुहोस हेरौ ब्रेकअप पछि केटीहरुले गर्ने विचित्र हर्कतहरु–
१. रातिराति रक्सी खाएर आफ्नो एक्स बोइफ्रेण्डलाई माया गर्छु भन्दै कन्भिन्स गराउन खोज्छन् । धेरै फोन गरेर केटालाई विभिन्न कुराहरु सुनाउने प्रयास गर्छन् । ब्रेकअप पछि केटीहरु अचानक सोसियल मिडियामा एकदम एक्टिभ हुन्छन् । बढेको शरिरको तौल घटाउन उनीहरु ध्यान समेत दिन्छन् । उनीहरुलाई सबैभन्दा बढी आफ्नो फिगरको टेन्सन हुन्छ ।
२. फेसबुकमा आफ्नो एक्स बोइफ्रेण्डलाई ब्लक गर्ने अनब्लक गर्ने काम बारम्बार गरिरहन्छन् । फेसबुकमा नयाँनयाँ फोटोहरु अपलोड गर्ने, प्रोफाइल फोटो फेर्ने काम उनीहरु गरिरहन्छन् ।
३. उनीहरु सधै एउटा कुराको चासो लागि रहन्छ कि कुन केटीका कारण बोइफ्रेण्डले उनलाई छोड्यो । सोसियल मिडियाबाट केटीहरु यस्ता कुराहरु पत्ता लगाउन खोजिरहन्छन् ।
४. ब्रेकअप पछि केटीहरुको आत्मविश्वास एकदम कमजोर भएर जान्छ । उनीहरु आफ्ना साथीहरुलाई आफु कस्ती देखिएकी छु भनेर प्रश्न सोधिरहन्छन् । उनीहरु आफ्नो एक्स बोइफ्रेण्डको गर्लफ्रेण्डभन्दा राम्री छु भन्ने देखाउन प्रयासरत हुन्छन् ।
५. ब्रेकअप पछि धेरैजसो केटीहरु सपिङ गरेर दिन बिताउन रचाउँछन् । यस्ता कामले उनीहरुको स्ट्रेस कम गर्न मदत मिल्छ । केही केटीहरु त सबै पैसा सपिङमा उडाइदिन्छन् । साथै रक्सी खाएर केटीहरु अरु केटाहरुसँग फ्लर्ट गर्ने काम समेत गर्छन् । यस्तो गरेपछि उनीहरुले एक्सले थाहा पाओस् र उनीहरुको सामु आओस् भन्ने चाहन्छन् ।